March 2, 2018 – PuraKhabar
सलमान नेपाल न आउने खबर संगै,आयोजक भन्छन जसरी नि नेपाल ल्याएरै छोड्छौं –
जसरी नि नेपाल ल्याएरै छोड्छौं – आयोजक , कति पैसा लगेका छन त सलमानले? पूरा पढ्नुहोस सलमान नआएपछि के हुन्छ बेचिएका ५ हजार टिकट ? करिना अधिकारी काठमाडौँः बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानको उपस्थितिमा काठमाडौँमा हुन लागेको दब्याङ्ग टुर स्थगित भएपछि बेचिएका ५ हजार थान टिकटबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको धम्कीपछि फागुन २६ गते हुन लागेको दब्याङ्ग टुर स्थगित भएसँगै कार्यक्रमका लागि बेचिएका टिकट आयोजकले फिर्ता गर्लान् या नगर्लान् ? यो कार्यक्रम आयोजन गर्न लागेको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी ओडिसी इन्टरटेन्मेन्टका सीमान्त…
कान्छी औंलाले खोल्छ व्यक्तित्वको सम्पूर्ण रहस्य
तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला तर औंलाको लम्बाइ र आकारले व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बताइदिन्छ । प्रत्येक औंलामा तीन भाग हुन्छन् । यी भागका आधारमा व्यक्तित्वको जाँचपरख गर्न सकिन्छ । कुनै भाग लामो भयो भने अरू दुई भाग छोटा हुन्छन् । तपाईंको कान्छी औंलामा टुप्पोको भाग अधिक लामो छ भने तपाईंप्रति मानिसको अत्यधिक आकर्षण हुन्छ । तपाईंको कुरा गर्ने तरिकाले पनि मानिस प्रभावित हुन्छन् । तपाईं आफैं पनि मानिसलाई गहिराइका साथ जाँचपरख गर्न सक्नुहुन्छ । कान्छी औंलाको बीचको भाग टुप्पो र फेदको भागभन्दा लामो भएमा त्यस्तो व्यक्ति अर्काको हेरचाह गर्ने किसिमको…
नक्कली कागजपत्र बनाउने धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा कोटेश्वरबाट एक युवक समातिए
काठमाडौं । विभिन्न संघ, संस्था तथा सरकारी कार्यालयहरुको छाप तथा दस्तखत कीर्ते गरी नक्कली कागजातहरु बनाउने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौंडा–१७, रातमाटे घर भइ कोटेश्वर बस्दै आएका २४ वर्षीय कविर श्रेष्ठ भनिने उदय थिङ छन् । उनी होकटर हेल्थकेयर नामक मेडिकल पसलका सञ्चालक हुन् । उनलाई प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठको साथबाट समाज कल्याण परिषद्, लैनचौकको लेटर प्याडमा तयार पारिएका १५ पाना कागजात, उदय सिंहको नामको यूएन अभजर्भर लेखिएको परिचय पत्रको प्रतिलिपी एउटा, नेपाल फार्मेसी परिसर लेखिएको स्टाम्प एउटा, विभिन्न स्कुल तथा…
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवको नाममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको पक्राउ पूर्जी टाँस र कानुनी धम्कीको पुरै खारेज गरेको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञाप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी जीवन देखि क्रान्ति, नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता र नेपाली जनताको राजनैतिक अधिकारका निम्ति समर्पित नेतृत्वलाई कथित विस्फोटक पदार्थको मुद्दा लगाई पक्राउ पूर्जी टाँस्ने अदालत र प्रहरी प्रशासनको हर्कतको पार्टी घोर निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । उनले यस्तो झुट, कपोकल्पीत, षड्यन्त्रमूलक, हाँस्यास्पद र राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न गरिएको प्रपंच यथाशक्य रोक्न ओली सरकार र त्यसका अदालत तथा प्रहरी…
काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो साता नै सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ४८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यससाता परिसूचकमा गिरावट आउँदा सेयर बजारको आकार (बजार पुँजीकरण) ४७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले घटेको हो । अघिल्लो सातको अन्तिम दिन १६ खर्ब २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँबाट घटेर १५ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा पुगेको नेप्सेले जनाएको छ । यससाता सेयर बजार परिसूचक करिब ४१ अंकले घटेको हो । अघिल्लो साता ३४ अंकले घटेको नेप्से यससाता कारोबार भएको तेस्रो दिनबाहेक अन्य दिन नसुधारिँदा परिसूचक ओरालो लागेको हो । यससाता पहिलो…
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयमा बेइमानी गर्नेलाई महाअभियोग लगाउने समय आएको बताएका छन् । नवलपरासीको बर्दघाटमा बिहीबार आयोजित ‘शहीद तथा वेपत्ता परिवार सम्मान’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘न्यायालयमा बेइमानी गर्ने, गरिबलाई न्याय नदिने जाली फटाहाहरुसँग पैसा लिएर उनीहरुको पक्षमा न्याय दिनेहरुलाई महाअभियोग लगाएर ठिक गर्ने समय आयो अब। भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई जेल हाल्ने बेला आएको छ। त्यसो नगरे विकास सुशासन सम्भव छैन। भ्रष्टहरुलाई तह लगाउन नसके जनताले हामीलाई नै सजाय दिने कुरा हामीलाई थाहा छ।’ अहिले नेपाली जनताले स्थायित्व र विकास खोजेको उनले बताए। ‘तर यसका…
काठमाडौँ । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुदै आएको चौधरी ग्रुपद्धारा उत्पादन गर्दै आएको वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थ र रसाइन विषदीयुक्त रहेको भेटिएको विषदीयुक्त रहेको भेटिएको छ । सोही कारण भारतमा सो चाउचाउको बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वाईवाई चाउचाउमाथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको हो । नेपाली ब्रान्ड ९उत्पादन० मानिने वाईवाई चाउचाउमा धेरै अखाद्य तत्व रहेको पुष्टि भारतको तामिलनाडुस्थित खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशाला ले गरेको अनुसन्धान अनुसार वाईवाई चाउचाउमा ७ दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (शिशा) रहेको भेटिएको छ । लिडको मात्रा…
फागुपुर्णिमाको दिन पारेर भुपेन्द्र पुलामिको लोकदोहोरी गीत मनैमा फुलौली सार्वजनिक (भिडियो सहित)
March 2, 2018 March 2, 2018 पुराखबर
﻿ सानै उमेर देखी सांगीतिक क्षेत्रमा होमिएका एक प्रतिभाशाली गायक हुन् भुपेन्द्र पुलामी । फागुपुर्णिमाको दिन पारेर उनको लोकदोहोरी गीत मनैमा फुलौली बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ । पछिल्लो समयका लोकप्रिय तथा सांगीतिक क्षेत्रमा एकक्षत्र राज गर्न सफल चर्चित सर्जक एकनारायण भण्डारीको लय/शब्द सृजनामा रहेको यस गीतमा भुपेन्द्रलाई गायीका सिन्धु वि.क.ले साथ दिएकी छन् । यो गीतको भिडियोमा प्रविन थापाको निर्देशन, नमराज घिमिरेको छायांकन र शक्तिप्रज्वल घिमिरेको सम्पादन रहेको छ । विजय केसी र रिना थापा मगरको जोडदार अभिनय रहेको यो गीत सार्थक डिजिटल प्रा.लि.ले बजार व्यवस्थापन गरेको हो ।…
युट्युबमा एक बालिकाको भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा देखिएकी बालिकालाई ‘बेबी श्रीदेवी’ नाम दिइएको छ । यो भिडियोको आधारमा यहाँसम्म भनिएको छ कि पृथ्वीमा श्रीदेवीको पुनर्जन्म भइसकेको छ । यो भिडियो श्रीदेवीको निधन हुनुभन्दा पहिले नै अपलोड गरिएको हो । नोइक्स टिभी नामको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको यो भिडियो श्रीदेवीको निधनपछि भाइरल भएको हो । यो भिडियोलाई अहिलेसम्म १ करोड ३० लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो भिडियोको श्रीदेवीको पुनर्जन्मसँग कुनै सम्बन्ध नभएपछि श्रीदेवीको मृत्युपछि भने यो भिडियो निकै हेरिएको छ ।
काठमाडौं – विदेशमा बसेर आर्जन गर्ने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट दैनिक एक अर्ब ८८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ स्वदेशमा पठाउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको खबर छ । गत वर्ष दैनिक एक अर्ब ९० करोड ४१ लाख रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । विदेश जाने नेपालीको स‌ंख्या घटेका कारण पछिल्लो समय रेमिटेन्स वृद्धिदरमा कमी आएको बताइन्छ । गत आर्थिक…